स्वास्थ्यमन्त्री कै निर्देशनमा विश्वसनियता नभएको आरडिटी किट किन्ने निर्णय, कमिसनको चक्कर ! – Butwal Sandesh
स्वास्थ्यमन्त्री कै निर्देशनमा विश्वसनियता नभएको आरडिटी किट किन्ने निर्णय, कमिसनको चक्कर !
काठमाडौं : स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकै निर्देशनमा आरडिटी किट किन्ने निर्णय गरेको छ। जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खे*लबाड गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रालयले आरडिटी किट किन्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य अनुसन्धान निकाय नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले लामो समय अध्ययन गरी आरडिटी प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाएको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त रिपोर्ट लुकाएर धमाधम आरडिटी किट खरिद गरिरहेको पाइएको छ।
परिषदले तीन साताअघि नै मन्त्रालयलाई कारोना भाइरसको सं*क्रमण पत्ता लगाउन आरडिटी किट प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाएको हो। परिषद्‍ले उक्त रिपोर्ट बुझाइसकेपछि पनि मन्त्रालयले थप एक लाख थान आरडिटी टेस्ट किट खरिद गरिसकेको छ भने थप तीन लाख किट किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
विश्वव्यापी म’हामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विदेशबाट आएका व्यक्तिमा देखिने गरेपनि अब बिस्तारै नेताभित्रै रहेका व्यक्तिमा समेत देखिन थालेको छ ।कोरोनाको त्रा*स यतिमै सीमित छैन, सरकारी स्रोतसाधन र जनचेतना फैलाउने काम गर्ने मन्त्रालयसम्मै पुगेको छ । २ नम्बर प्रदेशकी आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवका स्वकीय सचिवलाई कोरोना सं*क्रमण देखिएको छ ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मन्त्रीका स्वकीय सचिवमा सं*क्रमण पुष्टि भएको बताएका छन् । मन्त्रीका स्वकीय सचिवमा कोरोना सम्बन्धी कुनै लक्षण भने देखिएका छैनन् । कोरोना देखिएका स्वकीय सचिवलाई आइसोलेसनमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनअघि प्रदेशका मन्त्री, सांसद, स्वकीय सचिव, कर्मचारी र मर्यादापालकको स्वाब संकलन गरी जाँच गरिएको थियो । रिपोर्ट अनुसार प्रदेश सभाका ५ जना मर्यादापालक र मन्त्रीका स्वकीय सचिव गरी ६ जनामा कोरोना देखिएको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएका मर्यादापालकमा समेत कोरोना देखिएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र सांसद समेतमा कोरोनाको त्रा*स देखिएको छ । कोरोना मन्त्रालय र प्रदेशसभासम्मै पुगेपछि नेताहरूबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । मर्यादापालकमा सं*क्रमण पुष्टि भएपछि बिहीवारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ ।